Ekoatora: Atrikasa Mampifandray Ireo Mpikatroka Dizitaly Ho Soa Ho An’ny Teny Kichwa Ety Anaty Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Novambra 2016 7:00 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Français, русский, Español, English, Español, English
Saripika niarahan'ireo mpanatrika ny atrikasa fikatrohana dizitaly ho an'ny teny Kichwa. Sary an'i E. Avila
Ny 17-19 Aogositra, nifamory tao an-tanànan'i Otavalo ireo mpikambana avy amin'ny vondrom-piarahamonina Kichwa manerana an'i Ekoatora mba handray anjara tamin'ilay atrikasa naharitra andro telo nandinihana ny toeran'ny tenin'izy ireo, sy handrafitra fahaizamanao dizitaly, no sady hizara fahaizamanao ho fampiroboroboana ny tenindrenin'izy ireo ety anaty aterineto.
Diso fantatra loatra amin'ilay tsenabeny mitafo lanitra sy maroloko, izay mahasarika ny mponina eo an-toerana avy any amin'ny Faritanin'i Imbabura ary ny mpizahatany, 90 km miala an'i Quito renivohitr'i Ekoatora no misy an'i Otavalo. Fantatra tsara ihany koa amin'ny fandalàny ny fiteny sy kolontsaina Kichwa ilay tanàna, izay hatrany afovoan'ny tanàna no ahitanao ireo fitafy mampiavaka azy, ary mbola ifampiresahan'ireo tokantrano sy toeram-piasàna Otavaleño amin'ilay fiteny amin'ny fiainany andavanandro. Any amin'ireo biraom-panjakana sasany, afaka andrenesana ny fiteny Kichwa ihany koa, izay manamafy kokoa ny hafatra momba ny dindon'ilay fiteny amin'ny fampiasàna teny roa amin'ny fiainana andavanandro.
mpandray anjara tamin'ny atrikasa. Sary an'i E. Avila
Toerana nipoiran'ireo fandraisana andraikitra dizitaly maro ihany koa i Otavalo, hetsika izay mikatsaka ny fanandratana ny teny Kichwa amin'ny alàlan'ireo media dizitaly sy ny aterineto, miaraka amin'ny fanantenana hisarika ireo andian-taranaka vaovao mpiteny azy mba hiantoka ny faharetan'ilay teny. Tetikara iray tahaka izany ny Kichwashun, izay mitantana kaonty media sosialy marobe , ary ny tranonkala fanomezana torolalana Kichwa, Kichwa.net, no iray tamin'ireo mpikarakara voalohany ny atrikasa niarahana tamin'ny Fiadidiana ny tanànan'i Otavalo sy ny Global Voices tamin'ny alàlan'ny hetsika Fikatrohana ho an'ny Teny ao amin'ny Rising Voices.
Ny nampiavaka ity atrikasa ity dia ireo famelabelarana rehetra, fifanakalozankevitra, ary torolàlana nandritra ireo andro telo nanaovana azy dia natao tamin'ny teny Kichwa daholo, nandravàna ny fiheverana hoe tsy afaka mivady amin'ny teknolojia ity fitenin-drazana ity. Raha marina fa tsy ampy voambolana ho an'ireo teny teknolojika sasany ilay fiteny, dia sosokevitra avy amin'ireo mpikarakara ny hampiasàna ny fehezanteny hoe “Zirma atiriy” hilazana ny “fikatrohana dizitaly.”
Ity atrikasa tao Otavalo ity no voalohany amin'ny karazany, amin'io andiany io izay nifantoka tamin'ny fikatrohana dizitaly ho anà teny tokana, mifanohitra amin'ireo fifamoriana hafa niarahana nikarakara tamin'ny Global Voices tao Però, Kolombia, Meksika, ary Bolivia, izay nisokatra ho an'ny fikatrohana dizitaly ho an'ireo fiteny vazimba teratany any amin'ireny firenena ireny.
Mpandray anjara sy Mpanentana.
Taorian'ireo fihaonana mivantana sy antso ho an'ireo mpandray anjara tety anaty aterineto, olona 30 no nofantenana, nianga avy amin'ny fanolorantena nasehon-dry zareo ho entina hamelomana indray ny teny Kichwa sy ireo fahalalàna efa misy amin'ny aterineto. Niantohan'ireo mpikarakara ny hampifandanjàna ny lahy sy ny vavy ary ny fizaràna isam-paritra mba hahitàna ireo vondrom-piarahamonina Kichwa isankarazany, toy ny Karanki, Puruhá, Salasaka, Quisapincha.
Nandraman'ireo mpanentana ny savaranonando ireo mpikatroka dizitaly, Imbaya Cachiguango sy Sacha Rosero Lema, izay samy niasa ho an'ny Kichwashun ary tetikasa maro hafa tety anatiny sy ivelan'ny aterineto ho fanohanana ny vahoaka Kichwa.
Fijery midadasika ny lanonana Kichwa nialoha ny fanokafana ilay atrikasa. Sary an'i E. Avila.
Toy ny mahazatra, mialoha ny fanokafana hetsika goavana, nanasa tarika iray tao an-toerana ireo mpikarakara, ny “yachak” (shaman), mba hanao fampisehoana lanonana Kichwa iray antsoina hoe “wakcha kary”. Taorian'ny fanaovana boribory misarim-bonikazo teo amin'ny tany, ny mpitarika ny fombafomba no nitantana ny lanonana fanomezam-boninahitra ny Tany Reny, tamin'ny fiantsoana ireo singa efatry ny natiora: afo, rivotra, tany, rano. Ho an'ireo nandray anjara tamin'ity lanonana ity, fotoana iray io nanononana faniriana hisian'ny fanahy tsara mandritra ny hetsika hoavy.
Resaka ho an'ny Daholobe
Mba hahazoana mpihaino midadasika kokoa, nosokafana ho an'ny daholobe ny maraina voalohany tamin'ilay atrikasa, mba ho avy sy hihaino ny hevitra fototra manodidina ny zavatra atao amin'ny fikatrohana dizitaly ho an'ny teny Kichwa. Ireo nandray fitenena dia nanampy tamin'ny fametrahana ho anaty vanimpotoana ny antony ahafahan'ny aterineto mitàna anjara toerana fototra amin'ny tetikady ankapobeny hanomezana aina vao ny teny. Namelabelatra ny tetikasany manokana ny marobe tamin'ireo mpandray anjara tamin'ilay atrikasa, isan'ireny ny :
Hata – bilaogy irey miresaka tononkalo sy lahatsoratra hafa nosoratana manontolo tamin'ny teny Kichwa
Ñawpa Rimay – tetikasa podcast fandefasana feo ravahan'i Javier Chuqin
Kichwa Mashikuna – pejy Facebook nomena endrika hampitomboana ny fahitàna ny Kichwa ety anaty media sosialy
Taripana TV – fantsona YouTube momba ny kolontsaina Andeana, ahitàna lahatsary maro amin'ny teny Kichwa
Muyuntin – lahatsary (eto ambany) noforonin'ny Tinkunakuy Center momba ny niavian'ny tontolo Andeana tantaraina amin'ny fiteny Kichwa miaraka aminà sarimiaina.
Atrikasa fakàna traikefa
Taorian'ilay fotoana ho an'ny daholobe, nisy atrikasa mafimafy naharitra andro roa sy tapany natao tao amin'ny laboratoara natokana ho an'ny solosaina tao amin'ny sekoly iray ao an-toerana. Notarihan'i Imbaya sy Sacha, mpandray anjara nanome topimaso momba ireo karazana fitaovana dizitaly rehetra, ny zavatra rehetra miainga avy amin'ny famoronana kisary mahatsikaiky amin'ny teny Kichwa ka hatramin'ny fandehanana mivoaka mandray feo ireo mpiara-mandray anjara mba hamoronana rakipeo podcast. Nasehon'ireo mpandrindra sy mpanentana ihany koa ny fomba ahafahan'ny olona iray mamorona lahatsary kely ho alefa ao amin'ny Youtube, hatramin'ny fampidirana tsotsotra momba ny Wikipedia amin'ny teny Kichwa. Namorona vondrona Telegram ihany koa ireo mpandray anjara mba hahafahan'izy ireo mifandray tsy tapaka sy mifanohana ara-kevitra, mizara ny asany, ary mandrindra ny hetsika amin'ny hoavy.
Imbaya Cachiguango mitarika ny atrikasa momba ny lahatsary dizitaly. Sary an'i E. Avila.
Iray tamin'ireo atrikasa tena nalaza ny fianarana mamorona sary mahatsikaiky amin'ny fiteny Kichwa sy ny fizaràna azy ireny ao amin'ilay vondrona malaza Kichwa memes.
Fangon'ny pejy Facebook-n'ny vondrona Kichwa Memes .
Nanampy tamin'ny fanelezana ny feo momba ny fisian'ilay atrikasa ny fahalinan'ireo media tao an-toerana, nitarika olona maro hanontany ny fomba atao raha te-handray anjara. Ankehitriny ireo mpikarakara dia maminavina ny hanao azy io ho hetsika fanao isantaona, ary hitondra hetsika mitovy aminy hankany amin'ireo vondrom-piarahamonina hafa, toy ny Cotacachi, Saraguro, Azuay, Riobamba, hatramin'ny fiarahana miasa amin'ireo sekoly mampiasa fiteny roa any an-toerana. Nanolo-kevitra ihany koa ireo mpandray anjara ny amin'ny hanaovana fifaninanana sy hetsika hafa ety anaty aterineto ho endrika fialamboly hikolokoloana ny fahalinan'ny olona.
Ny hevitra hafa dia ny filàna mampifandrohy ilay fikatrohana dizitaly ho an'ny fiteny amin'ireo endrika hafa nentindrazana fanehoana ny kolontsaina, toy ny asa tànana sy ny fahaizana ara-pambolena. Na dia ny tanora aza no sehatra iray ao anatin'ny vahoaka tena akaiky indrindra ny aterineto, ilaina ihany koa ny manatona ireo ray aman-dreny amin'ny famporisihana azy ireny handefa hafatra amin'ny fomba hafa mba hitahirizana ilay teny tsy ho faty.
Cachiguango niteny hoe, “tsy ao amin'ny media sosialy ihany no tena fiainana ao anatin'ny tontolo Kichwa, fitaovana fotsiny ihany io, izay manampy antsika hampiasa ny Kichwa. Raha mbola tohizan'ireo mpiteny azy ny fampiasàna azy, tsy hanjavona ny Kichwa.”